Nagarik Shukrabar - आँचलको लुँडो प्रेम
आइतबार, २८ असार २०७७, १० : ५०
आँचलको लुँडो प्रेम
आइतबार, २६ साउन २०७६, ०४ : ०० | शुक्रवार
लक सधैँ कहाँ लाग्छ र ? हेर्नुस् त हाम्री हिरोइन आँचल शर्मालाई ! कुनै समय क्या प्याक थियो उनको सेड्युल ! म्युजिक भिडियोमा उनकै डिमान्ड ! फिल्ममा उनी नै हिट ! बजारमा उनकै तानातान। तर अहिले भने लुँडो खेलेर बस्नुप-या छ। म्युजिक भिडियोमा अरुकै कब्जा ! ठूला गफ दिए पनि अभिनय फिट्टो नगरेपछि फिल्म पनि फुत्किकाले।
म्युजिक भिडियोको जुनसुकै मौसममा पनि एकछत्र उनकै राज चल्थ्यो। सयौंको संख्यामा गरेका उनका भिडियो अहिले सम्झेर ल्याउँदै उनैले गरेकी हुन् र भन्ने पनि लाग्छ। जताततै उनकै अनुहार देखिएपछि फिल्म निर्माता र निर्देशकको नजर पर्ने नै भयो, प-यो पनि।
फिल्मको अफर आयो त्यो पनि सिक्वेल किङ विकास आचार्यको ‘नाइँ नभन्नु ल ४’ मा। डेब्यु नै दमदार, प्रोडक्सन हाउस र फिल्म चलाउन माहिर निर्देशक तथा निर्माताबाट। फलिफाप पक्का !
तर डेब्यु फिल्ममा लक लागेन आँचललाई ‘नाइँ नभन्नु ल’का तीन सिरिज मज्जाले चल्दा ४ मा आएर ब्रेक लाग्यो। निर्माण पक्षले फ्लप भयो त कहाँ भन्छन् र ? तर भएको त फ्लपै हो।
डेब्यु फिल्म फ्लप भए पनि फिल्मको अफर भने आइनै रहे। त्यसपछि ‘जोनी जेन्टमलमेन’ आयो। त्यसको हालत पनि डब्बै भयो। ‘ब्ल्याक’ले उनको फिल्मी यात्रामा लागेको ग्रहण हटाउन सकेन। ‘शत्रु गते’ उनको फिल्मी करिअरका लागि शत्रु नै भयो अनि ‘दाल, भात, तरकारी’ले फिल्म खेलेर दालभातको जोहो गर्ने बाटो खोलिदिएन।
समस्या के भने, उनका लागि म्युजिक भिडियो र फिल्ममा अभिनय उस्तै उस्तै देखियो। गीतमा कम्मर मर्काएर ३–४ मिनेट कटाउनु र झण्डै २ घण्टा दर्शकलाई बाँधिराख्नु कहाँ एकै हुन्थ्यो र ? भएन पनि। रुँदा हाँसेजस्तो, हाँस्दा रोएजस्तो क्यारेक्टर देखियो विचरा आँचलको। उनका नाममा सधैँ जोखिम कसले उठाओस्। उठाएनन्।
प्रेमका किस्सा पनि खुब चल्यो उनको। म्युजिक भिडियोमा प्रायः सँगै देखिने पल शाहसँग डिप लभ चलेको हल्ला आइरहे। यो हल्लाले कतै फिल्म चलिहाल्छ कि भन्ने लोभैले त होला, फिल्ममा आँचल अनुबन्ध हुँदा पल पनि सँगै हुन्थे। तर कस्मेटिक लभतिर के आकर्षित हुन्थे र दर्शक। पत्याइदिएनन् विचरीलाई।
अनि त फुसर्दै फुर्सद। बजार हल्लाअनुसार हिजोआज उनको दिनचर्या घरमै बित्छ। बिहानै ८/९ बजे उठ्यो, आमाले पकाएर ल्याएको चिया खायो, बस्यो। झ्याउ लागे परिवारका चार सदस्य भेला भयो। मोबाइलमा डिजिटल लुँडो खेल्यो। बाँकी समय उँग्दै बस्यो।
म्युजिक भिडियो र फिल्ममा हार भए पनि लुँडोमा चैँ उनैले जित्छिन् कि हार्छिन् होला हँ ?